Ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eso ụzọ gị kwupụta na ọ bụ ndị na-akwado ndị na-ekesa na werven: ReachOut-campaigns over hele wereld ịhazi gị na Rhapsody nke Realities nkejdens deze campaigns na verspreiden.
Onye ọ bụla chọrọ Rhapsody of Realities dịka onye nduzi ọmụmụ Bible, karịsịa ndị ozi nke Oziọma ahụ. Soro netwọk mgbasa ozi a, na ndị ozi na-enyere aka gburugburu ụwa na-achọpụta akụ bara ụba nke Okwu ahụ na Rhapsody of Realities.
Anyị bụ ndị na-ahụ maka ịntanetị nke ndị nwere mmasị na-eji nkà na ụzụ eme ihe n'inweta ozi ụwa na Oziọma ahụ. Jikọọ na Rhapsody Influencers Network (RIN) taa!
Soro netwọk ụwa zuru ụwa ọnụ nke ndị nsụgharị bụ ndị ọrụ ha bụ ime ka Okwu Chineke dịrị ma nwee ike ịnweta ndị niile n'asụsụ ha ghọtara nke ọma.
Rhapsody Prayer Partners 'Network Web App bụ ikpo okwu maka onye ọ bụla na-ekpe ekpere maka mgbasa nke Okwu Chineke gburugburu ụwa, site na Rhapsody of Realities. Debanye aha gị taa, nyefee arịrịọ gị n'ekpere ka anyị sonye aka na-emetụta ndụ ndị ọzọ na ndụ anyị!
Rhapsody Daily Article Sharing Platform bụ mfe ma dị mfe iji ngwa weebụ nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịkekọrịta akụkọ kwa ụbọchị. Ọ na-agba ume ịkekọrịta ma n'otu oge ahụ na-enye ihe ndekọ ziri ezi nke nkesa e mere; ha nile n'otu ebe !!
Mee ihe ndị ọzọ na Rhapsody nke Realities! Lelee Rhapsody TV, Rhapsody Travels na Rhapsody Dailies.
Ịchọrọ ịmụta otú ị ga - esi bie ndụ mmeri na nke nwere nzube? Ị na-achọ ozizi nwere nghọta na azịza dabeere na Okwu nke ọ bụla n'ime ajụjụ ọtụtụ ndụ? Akụkụ dị ukwuu nke akwụkwọ ndị e tere mmanụ ga-ewetara gị ahụmahụ na-akwụghachi ụgwọ ma gbanwee ndụ gị ruo mgbe ebighị ebi! Ebe a bụ ebe ị ga-esi dee akwụkwọ niile site n'akwụkwọ edemede kachasị mma, pastọ Chris Oyakhilome D.Sc., D.D.
Nweta ihe omuma nke Rhapsody of Realities on go! Ọ bụ ụwa ọhụrụ nke mmụọ nsọ na ike Chineke niile nke e ji kelee ya na ngwa Rhapsody nke Realities Mobile.